Nyorera Izvozvi Kune UNDP Jobho muAbuja yePurogiramu Mubatsiri 2021: Yazvino Chikoro Nhau
Nyorera Izvozvi Kune UNDP Jobho muAbuja yeProgramu Mubatsiri 2021
Nyorera Izvozvi Kune UNDP Jobho mu Abuja 2021: Uri kutsvaga basa muNigeria 2021? Ungade here kushanda kuUNDP? Zvakare, iwe haungave nehanya kana tikakutungamira iwe pamabatiro aungaita kunyorera UNDP mabasa kutora muNigeria nekupfuura? Kana hongu, ramba uchiverenga.
United Nations Development Program (UNDP) inobatsira nyika dzichiri kusimukira kukwezva nekushandisa rubatsiro zvakanaka. Muzviitiko zvedu zvese, tinokurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu, kusimudzira kugona uye nekupa masimba kumadzimai.
UNDP iri kutora kuzadza chinzvimbo pazasi:
Musoro webasa: Chirongwa Mubatsiri - Nigeria Kudyidzana Pakusimbisa Kutongwa Kwemhosva Kupindura Kugandanga (pasi peprojekti yepasi rose "Kusimbisa Mutemo Wezvemitemo Kurwisa Ugandanga"): GLOR35
Jobho ID: 4234
Nzvimbo Yekudzidzira - Jobho Mhuri: Runyararo Kuvaka
Rudzi Rwemuchina: Contract Service (SC)
Kutumira Rudzi: Kunze
Chibvumirano Nguva: Kutanga kwenguva yegore rimwe
Iyi nzvimbo inowanikwa muUnited Nations Hofisi yeDrugs uye Crime (UNODC) Nyika Hofisi muAbuja, Nigeria (CONIG).
Kushanda pamwe chete muchikwata nevamwe vashandi vanotsigira purojekiti muCONIG, uyo ari pachinzvimbo anozove nebasa rekupa rutsigiro rwekushanda, kuronga, kuronga uye manejimendi kuchirongwa.
Izvi zvinosanganisira kuronga nekuita zvakasiyana siyana zvekushanda, zvekushandisa uye zvehutariri zvinodiwa zvezviitiko zveprojekti; kuronga kufamba kwevashandi veprojekiti, nyanzvi nevatori vechikamu; kugadzirira fungidziro dzemutengo uye kuchengetedza fungidziro yemashandisirwo; kugadzira nekuparadzira magwaro munguva yakakodzera; kutsigira pa-saiti kuitisa zviitiko; kugadzirira nekupa rutsigiro rwevanyori, nezvimwewo.
Sezvinodikanwa, iye / achazopawo rutsigiro rwekutenga nekutenga bhajeti uye mari manejimendi kutsigira chirongwa.
Iye anoshanda achashanda pasi pekutariswa kwakananga kweakasarudzwa weprojekiti (s) uye kutungamira kweProjekita Coordinator uye kutungamira kwese kweMumiriri weUNODC uye Musoro wePurogiramu.
Iyo nhanho yepositi ndeye SB3 / 2 (yakaenzana neG5).
Anobatira achaita anotevera mabasa:
Ipa tsigiro yekushanda, yesangano, yekugadzirisa uye yekutarisira kuchirongwa;
Shanda pamwe neProjekita Coordinator, mamwe maofficial maofficial uye anotungamira Chirongwa Mubatsiri kuti ave nechokwadi chekuti inodiwa manejimendi uye yesangano rutsigiro rwunopihwa kune akasiyana siyana, kazhinji panguva imwe chete, eprojekiti zviitiko.
Batsira manejimendi (s) uye nevamwe vakapiwa maofficial maofficial ekuita kwavo mabasa eprojekiti nekuita akasiyana mabasa ekutsigira.
Kuzivikanwa uye kuita zvinodiwa zvehurongwa, zvigadzirwa uye manejimendi marongedzero emasumbu ezviitwa zveprojekiti, semasemina, mashopu nemisangano.
Izvi zvinosanganisira: kuona zvinodiwa nebasa uye kuronga kwekutenga kwavo, kuronga mafambiro uye pekugara kwevashandi veprojekiti, nyanzvi nevatori vechikamu; kugadzirira uye nenguva kufambisa magwaro; kutsigira pane-saiti kuitisa zviitiko, nezvimwe.
Ipa rutsigiro kune UNODC Security Focal Point pane UNODC yekuchengetedza vashandi.
Raira uye gadzira zvekutakura nekutambirwa kwehofisi uye zvigadzirwa zvekushandisa nemidziyo uye zvinokanganisa imba; kusanganisira clearance yetsika.
Ipa rairo uye ubatsire vashandi nevanovimba navo nekugadzirisa zvikumbiro zvemavisa, zvitupa, marezinesi ekutyaira uye mamwe magwaro ane chekuita nevashandi zvinoenderana nezvinodiwa neUnited Nations uye nenyika yenzvimbo yemabasa.
Ita mamwe mabasa sekudikanwa, senge tsamba zhinji, enda kumisangano uye gadzirira maminetsi emisangano, nezvimwe.
Ipa rutsigiro rwekutenga uye bhajeti uye manejimendi manejimendi eprojekiti: shanda pamwe neBudget neMubatsiri weMari weprojekiti, basa rekutsigira munzvimbo ino pazvinenge zvichidikanwa
Shanda padhuze neMutungamiri Wechirongwa Chekushandira uye shanda sekuseri-kumusoro sezvazvinodiwa
Gadzirira fungidziro yemutengo uye chengetedza fungidziro yemashandisirwo uye kuongororwa kwezviitiko zveprojekiti.
Batsira mukutaurirana zvisina kurongwa uye zvisina kurongwa uye nekuteedzana nekuonana nemasangano eHurumende nezviremera.
Chengetedza kugara uchitaurirana nekubatana mukati meCONIG uye neTerrorism Prevention Branch uye Chikamu cheDunhu reAfrica neMiddle-East; taurirana na UNDP nemamwe masangano ane hukama neUN pazvinhu zvekutungamira zvine chekuita nekuitwa kweprojekti.
Unganidza, nyora uye chengetedza mafaera pane ruzivo rwakanangana nezviitiko zveprojekti, gadzira zvigadzirwa zvemishumo yeprojekti uye akakodzera maratidziro eruzivo uye chengetedza rosters emasangano uye nyanzvi; chengetedza zvinyorwa zvine mutsindo nezve zviitiko zvepurojekiti, kusanganisira ajenda, runyorwa rwevatori vechikamu, ruzivo rwevanyanzvi uye nhoroondo.
Batsira mukutarisira zvakanaka kwemidziyo, kuongorora, kurekodha nekurasa, mukugadzirira risiti uye Inspection (R & I) mishumo yekutumirwa kune akakodzera matunhu ekutenga uye mamishini ekuongorora
Batsira uye kugadzirira zvirongwa uye zvigadzirwa zvevashanyi vanoshanya, mamishini, vamiriri uye vamiriri vevanopa.
Ita mamwe mabasa sekupihwa kupihwa.
Unyanzvi mukutungamira kweprojekti uye kuronga kusanganisira ruzivo rwakakwana uye kunzwisisa kwemaonero uye nzira dzakanangana nebhajeti uye manejimendi manejimendi. ruzivo rwemitemo yezvemari nemirau yeUnited Nations pamwe nekujairirana nemabatiro eUN uye maitirwo azvinoenderana nechirongwa chebhajeti nekutarisirwa kwemari; yakaratidza kugona kwehunyanzvi uye kugona kwemaitiro ekutonga; kugona kuita hwakawanda hwehutariri mabasa, kusanganisira kuronga zviitiko nekuronga uye manejimendi manejimendi manejimendi. kugona mepu dzinogona kuve nenjodzi uye kuita zvinoitika, sezvazvinodiwa.
Inoratidza kudada nebasa uye kubudirira. anoshingairira uye anokwanisa mukusangana nezvisungo, kucherechedza nguva dzakatarwa uye kuzadzisa mhedzisiro; inokurudzirwa nehunyanzvi kwete zvinonetsa munhu; inoratidza kushingirira kana wasangana nematambudziko akaoma kana matambudziko; uye kuratidza kuzvipira kuhunhu hweUnited Nations, kunyanya kutendeseka mumabasa ezuva nezuva uye maitiro.
Chii chako chaunotora ku Nyorera Izvozvi Kune UNDP Jobho mu Abuja yeChirongwa Mubatsiri 2021? Ndinokukurudzira kuti ushandise zvakafanana mukana kugovana ruzivo urwu nevamwe uchishandisa yedu Facebook, Twitter, or Google+. share bhatani pazasi.
Nyorera Izvozvi ZveMabasa Ekubvunza kuNDP, Abuja - 2016
United Nations Yevana Fund Fund Job Vacancy Portal 2021 www.unicef.org
Sangano Romubatanidzwa Wenyika Dzepasi Pose Rekuvandudza Portal 2021 www.undp.org
Sangano Romubatanidzwa Wenyika Dzepasi Pose Rekushandira 2021/2022 Fomu Rekunyorera
UNICEF Jobho Kune An Administrative Mubatsiri 2021 Nyorera Izvozvi
UNICEF Jobho Kune A Health Officer 2021 Nyorera Pamhepo Zvino
UNICEF Kuchengetwa kweVashandi vezvehutano muAbuja, Nigeria 2021
Tags: Abuja Mabasa, Nyorera Izvozvi Kune UNDP Jobho, Nyorera Izvozvi Kune UNDP Jobho 2021, Nyorera Izvozvi Kune UNDP Jobho mu Abuja, Nyorera Izvozvi Kune UNDP Jobho mu Abuja 2021, Nyorera Izvozvi Kune UNDP Jobho mu Abuja yeMubatsiri wePurogiramu, Nyorera Izvozvi Kune UNDP Jobho muAbuja yeProgramu Mubatsiri 2021, Nyorera Izvozvi Kune UNDP Mabasa, Nyorera Izvozvi Kune UNDP Mabasa 2021, UNDP
« BLW Vashandi Portal www.blwstaffportal.org/auth/login/?refr=Lw== Dzokorora
Fenix ​​Yepasi Pose Yakasarudzika Musarudzo 2021/2022 PDF Chinyorwa Chirodha pasi »